Kwemakore akati wandei, ini ndakaratidza shanduko iyi ndiyo yega inogara ichitengeswa nevashambadzi. Shanduko muhunyanzvi, masvikiro, uye mamwe magero maseru ese akamanikidzwa masangano kuti agadzirise kune zvinodiwa nevatengi nemabhizinesi
Asi denda uye zvine chekuita nekukiya kwakamanikidza shanduko isingatarisirwi iyo yatisingazombofungire. Vatengi vaimbonyara kutora e-commerce vakadirana kwariri. Nzvimbo dzemagariro senzvimbo dzechiitiko, maresitorendi, uye mabhaisikopo emamuvhi akamisa mashandiro - mazhinji akamanikidzwa kuvhara zvachose.
Kune mashoma maindasitiri asiri kuvhiringidzwa izvozvi nedenda, kusimukira munharaunda, uye mashifts muvatengi & bhizinesi maitiro. Ini pachangu ndaona kumwe kuchinjika kukuru nevatengi uye vatinoshanda navo:
Kunyangwe yangu agency nyowani yaifanira kugadzirisa zvachose kutengesa kwayo uye kushambadzira. Gore rakapera, takashanda zvakanyanya mukubatsira mabhizinesi manhamba kushandura ruzivo rwevatengi. Gore rino, izvi zvese nezve zvemukati otomatiki, kugona, uye kunyatso dhata kudzikisira iro basa revashandi vasina kuraswa.
Iyi infographic kubva mobile360, inokwanisika SMS mupi wemabhizimusi madiki, epakati, uye makuru mabhizimusi anotsanangura kukanganisika kwedenda uye kukiyiwa kwekutanga, kutanga bhizimusi, uye mabhizinesi zvakadzama.
Nepo mabhizinesi mazhinji ari mumatambudziko, pane mimwe mikana. Izvo hazvisi zvekujekesa denda - zvinova zvinotyisa. Nekudaro, mabhizinesi haakwanise kungokanda tauro. Idzi shanduko dzinoshamisa kune bhizinesi nzvimbo hadzina kuomesa zvese zvinoda - ingori kuti mabhizinesi anofanira pivot kuzvichengeta ivo vapenyu.
Tags: bhizimisiCOVID-19gdpinfographiclockdownkukiya nhambamobile360pandemicnhamba dzehoshaSMS